हरिबोल महत २०४९ र २०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा हेटौँडा नगरपालिकाका उपमेयरको जिमेवारिमा थिए नेकपा (एमाले) मकवानपुर जिल्ला कमिटीमा रहेर काम गर्दै लोकप्रिय जनप्रतिनिधिको परिचय बनाउन सफल महत दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार हुनु भएको छ । उसो त हेटौँडा नगरपालिका पनि आसपासका केही गाविस गाभिएर हेटौँडा...
अहिले राप्रपामा सबैको आकर्षण छ : मधु अधिकारी
हेटौंडा उपमहानगरको मेयर को बन्ला भन्नेमा यतिबेला आम सर्वसाधारणमा चासो छ । विभिन्न पार्टीले आफ्ना चुनावी एजेण्डा सहित मेयरका आकांक्षीलाई अघि सारेका छन् । मेयरमा उम्मेदवारी टुङ्गिइसकेकाहरु जनताको घरघरमा पुगेर आफूलाई जिताउन लबिङ् गरिरहेका छन् । राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरले हेटौंडा उपमहानगरको मेयरका लागि मधु अधिकारीलाई...
मकवानपुरगढी गाउँपालिका समृद्द बनाउँनेछु : विदुर हुमागाईं
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि एमालेले विदुर हुमागाईंलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले मकवानपुरगढी गाउँ सङ्गठन कमिटीबाट सर्व सम्मत अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका हुमागाईंको स्थायी बसोबास मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५, आमभञ्ज्याङ् हो । वि.स.२०४२ सालमा आधुनिक राष्ट्रिय मावि, हेटौंडामा अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक जीवनयात्रा...
मलाइ आरक्षण चाहिदैन :विश्वकर्मा
पवित्रा विश्वकर्मा, मकवानपुरमा दलित महिला नेतृ हुन् । उनी लामो समयदेखि दलित महिलाका क्षेत्रमा आफ्नो संस्थामार्फत विभिन्न गतिविधीमार्फत लागिपरेकी छिन् । उनी नेपाली काङग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीति पनि गरिरहेकी छिन् । काङग्रेस निकट दलित संघको उनी केन्द्रीय सदस्य हुन् भने दलित महिला संघ मकवानपुरको उनी अध्यक्ष हुन् । अहिले देश चुनावी...
एमालेलाई कसैले हराँउन सक्दैन: सिग्देल
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा मकवानपुरमा पनि चुनावी गतिविधि बढीरहेको छ । चुनावमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउँन जिल्लामा क्रियाशील सबै दल यतिबेला व्यस्त छन् । आफूलाई चुनावमा जिताएमा देशको मुहार फेर्ने देखि नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने सम्मका भाषण गरेर आम सर्वसाधारणको ध्यान तान्ने काम दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।...
‘माझी समुदायले सधैं खोलामै भविष्य खोज्नुपर्ने ?’
नेपाल माझी उत्थान संघ मकवानपुर जिल्ला कार्य समितीको अध्यक्षमा आशिष माझी निर्वाचित भए । यहि चैत २६ गते माझी समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्र छतिवनमा भएको संघको अधिवेशनले आशिषलाई अध्यक्ष बनाएको हो । माझी समुदायका जोशिला २८ वर्षिय युवाको काँधमा संघ मकवानपुरको नेतृत्व छ । मकवानपुरमा के छ माझी समुदायको अवस्था ? अनि माझी समुदाय हकहितका लागि अब...
हचुवाको भरमा आइसीयू सेवा हुदैन : गिरी
हेटौंडा अस्पताल विकास समिती अध्यक्षमा रमेश गिरी यहि चैत ३ गते नियुक्त भए । पहिले रिफर सेन्टरको रुपमा चिनिएको अस्पताल सुनील मोक्तानको नेतृत्वको व्यवस्थापनले केही सुधार गरेको छ । अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गिरीले अस्पताललाई सुधार तथा विकास गर्ने कस्तो योजना बनाएका छन् त ? मध्यस्थता सहकर्मी सम्झना रिजालले उनै गिरीसंग...
‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग अब नाफामा जान्छ ।’
हेटौडा सिमेन्ट उद्योग विगत केही बर्ष यता घाटामा गइरहेको समाचार आइरहेका छन् । जसका कारण उद्योग नै बन्द हुने हो की भन्ने आम नागरिकको चिन्ता पनि छ । यो उद्योगको व्यवस्थापन समिती अध्यक्षमा चार महिना अघि रघुरमण न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । उनको नेतृत्वपछि उद्योगको अवस्थामा के प्रगति भयो ? अनि उद्योगको आगामी कार्य योजना के छन् ? यसै विषयमा...
युवा स्वरोजगार बनाउने योजनामा छौं : चौलागाईं
देशको सबै जिल्लामा स्थापित जिल्ला युवा समितीले युवालाई स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गराउन सहजीकण गरिरहेको छ । सन्तोष चौलागाईं अध्यक्ष रहेको मकवानपुरस्थित जिल्ला समिती पनि युवाहरुलाई स्वरोजगार, सिर्जनशील बनाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्न अभिप्रेरणा दिने अभियानमा लागिपरेको छ । २०७२ साल साउन २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय...